मनोज गजुरेललाई पूर्वपत्नी मीना ढकालले लेखिन् भावुक सन्देश
काठमाडौं। कोरोना संक्रमित चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि उनकी पूर्वपत्नी मीना ढकालले एक भावुक सन्देश लेखेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले मनोज गजुरेलको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी हुन्।
कोरोना संक्रमित गजुरेल छिट्टै हार मान्ने मान्छे नभएको ढकालले बताएकी छिन्। आफू अहिले अलग भए पनि दुई सन्तानको जन्मदाताको रूपमा आज पनि गजुरेललाई उत्तिकै सम्मान र माया गर्ने उनले सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन्। उनले जतिसुकै मनमुटाब भए पनि सिकिस्त भएको खबर सुन्दा आफूमा बेचैनी बढेको बताएकी छन्।
यता मनोज गजुरेलले पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमित भएपछि अस्पताल भर्ना भएका गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत गराएका छन्।
शुक्रवार राति अस्पतालबाटै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आराम छु, आरामको कामना गर्दछु। हिजोभन्दा आज धेरै राम्रो भइरहेको छ। स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद।’
कोरोना सङ्क्रमणपछि होम आइसोलेशनमा बसेका गजुरेलको स्वास्थ्यमा कठिनाइ आएपछि बुधवार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा भर्ना गरिएको थियो। गजुरेललाई अक्सिजनको कमी भएको र फोक्सोमा सङ्क्रमण देखिएको डाक्टरहरूले बताएका छन्। गजुरेलमा गत कात्तिक १० गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
यस्तो छ सन्देश
जिन्दगीले जुनसुकै मोड अख्तियार गरेको भए पनि तिमी कुनै समयको मेरो प्रेमी थियौ। मेरो आफ्नै जन्मदातालाई भन्दा बढी प्रेम तिमीलाई गरेरै तिमीसँग एकाकार भएकी थिएँ। हामी एक भएका थियौँ र म परम्परा अनुसार तिम्रो सिन्दूरको ऋणी भएकी थिएँ।
तिम्रो सेवालाई मेरो परम धर्म ठानेर तिमीसँग मैले जीवनका बिसौं वर्ष पार गरेकी छु। तिम्रो र मेरो आत्मीयताका साक्षी दुई प्राण छोरा र छोरी जन्माएकी छु। केही अपवादलाई बाहिर राखेर र मेरा केही खुसीहरूको गला रेटेरै पनि मैले तिमीलाई मेरो सिङ्गो जिन्दगी अर्पण गरेकी थिएँ।
भलै समयले तिम्रो र मेरो बिचमा दुरी ल्यायो होला फेरी पनि मेरा दुई सन्तानको जन्मदाताको रूपमा आज पनि म तिमीलाई उत्तिकै सम्मान गर्छु र माया गर्छु। आज तिमी आइसीयूमा उपचाररत छौ भन्ने समाचारले मलाई विक्षिप्त बनायो। जतिसुकै मनमुटाब भएको भए पनि तिमी सिकिस्त भएको म सहन नसक्ने नै रहेछु आज महसुस भइरहेछ।
म तिम्रो सुस्वास्थ्यको लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु । तिम्रो जीवनसँग मेरा दुई सन्तान पनि जोडिएका छन्। तिमी ठिक छौ र त उनीहरू ढुक्क छन्, सुरक्षित छन्। छुट्टै भए पनि टाढै भए पनि तिम्रो सलामतीले मात्रै मेरा सन्तान सलामत छन्। म यो रियलाईज गरिरहेछु।
मेरो प्रार्थना सुन्छन् भगवानले, तिमी छिटै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेछौ र बाबुनानीको सामीप्यमा पुग्नेछौ भन्ने आशामा छु। मनोज गजुरेल, तिमी छिटै हार मान्ने मान्छे होईनौं। मैले बिसौँ तिजका निराहार व्रत बसेकी छु तिम्रो लागि। आज पनि तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न छोडेकी छैन। छोराछोरी तिम्रो प्रति़क्षामा छन्..। तिमी र म बिच जस्तासुकै व्यवहारिक बेमेल भए पनि तिम्रो जीवन मेरोलागि महत्त्वपूर्ण छ। हार नमानिदेउ। छिटै रिकभर भएर घर पुगेको देख्न पाउँ!
उही तिमीलाई आयुश्मान भएको देख्न चाहने तिम्री पूर्व अर्धाङ्गीनी!!